jeudi, 25 novembre 2021 19:35
Pilo kely : Ahiahy tsy hihavanana
Tsy aleo ve atao sac lokom-boasary ihany ty "ciment mora" ity, sao afangarondreo amin'ny stock ndreo eo foana ty anareo mora ity, nefa ny prix ndreo lafo no amarotandreo azy.
Na koa sao endrikendrehan'olona eo koa nareo hoe ny an'olona efa tonga teto indray io nobakoavinareo io, dia hoe tonga ny "ciment mora". Mety ho tafakatra 500 000$ manko ny fatiantoky ny tompony raha sanatria ka ho izay.
Teny amin’ny arabe ny mponin’Ambatomaro no naneho ny alahelo, miaro hatezerana omaly manoloana ny fijaliana amin’ny rano.
jeudi, 25 novembre 2021 19:15
Ady amin’ny Covid-19 : Vaksiny efatra karazana izao no azon’ny Malagasy sitrahana
Vaksiny Pfizer miisa 398 970, azo antoka sy efa vita sedra, no tonga androany teto Madagasikara. Ireo vaksiny avy amin’ny COVAX ireo dia tafiditra anatin’ny ezaka ataon’ny fitondran’ny Filoha Biden sy Harris hampitomboana haingana ny isan’ireo vita vaksiny manerantany hampitsaharana ity valanaretina ity.
Fanintelony izao ny vahoaka amerikana no nanolotra vaksiny ho an’i Madagasikara. Tamin’ny volana jolay dia nanolotra vaksiny hiadiana amin’ny Covid miisa 302 750, izay avy amin’ny tahiriny manokana i Etazonia, ary nampiany 336 000 fatra izany tamin’ny volana oktobra teo.
Efatra izany izao ny karazana vaksiny azon’ny Malagasy isafidianana, dia ny Covishield, Johnson&Johnson, Sinopharm ary ity Pfizer ity.
jeudi, 25 novembre 2021 14:20
Toe-karena : Fanjakana mpandraharaha
Lasa nahazatra moa tatoato ny nahare, fa niakatra ny vary, dia anafatra vary 20 sambo ny fitondrana.
Nidangana koa ny vidin'ny simenitra, dia nanafatra 30 000taonina ihany koa ny fanjakana amin'ny alalan'ny SPM SA - State Procurement of Madagascar, izay orinasa natsangan'ny fanjakana.
Ity farany moa dia manjavozavo hatreto, iza avy no mpiara-miombon'antoka ao aminy, an'ny fanjakana 100% ve ny petrabola sa misy olona na orinasa hafa. Inona no nifanarahana ?
Ny hita aloha, dia tamin'ny fotoana namaivay nifandonan'ny fanjakana tamin'ireo mpamatsy solika no nipoiran'ny hevitra ka hoe hitady solika ny SPM amatsiana solika mora ny firenena Malagasy.
Ankehitriny, nanafatra ciment lucky ny SPM, nefa fantatra fa manana fifanarahana manokana afaka mivarotra azy eto amintsika na exclusivité, amin'izay fanafarana ciment lucky izay ny mpandraharaha lehibe ao Toamasina.
jeudi, 25 novembre 2021 11:00
Ninie Doniah : Nosamborina fa mitarika fanonganam-panjakana ?
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny Facebook i Bezara Eliane Virginie, fantatry ny maro amin’ny anarana maha mpanakanto hoe : Ninie Doniah, ny talata 23 novambra 2021, nampahafantatra fa “niboaka zahay hariva be, fa hoe mitady hanongam-panjakana, ary contre projet presidentiel zegny ny antony nisamboragna zahay 5”.
Resaka fiarovana tany no fototry ny olana.
Andaniny ny orinasa SIRAMA milaza fa azy ny tany ary hanaovana “projet présidentiel” EPP Manarapenitra.
Ankilany ny mponina tarihin’i Ninie Doniah mijoro fa tany manan-tompo, an’i Mahafaly Olivier, praiminisitra teo aloha ity tondroina hanaovana “projet présidentiel”, ka aleo ny tany ho an’ny Malagasy, hoy izy ireo, fa tsy omena ny vahiny izay ambaran’i Ninie Doniah fa lasan’ny Karana ny tany mifanila amin’io toerana io, nefa tsy kitihina, ka toherin’izy ireo izany.
Nilanja sorabaventy teo amin’ny toerana io, manohitra ny fakana ny tany an’ny Malagasy ny andian’olona maromaro, izay misy tompontany ary misy Malagasy valovotaka avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, tarihin’i Ninie Doniah, tamin’ny fotoana nahatongavan’ny avy amin’ny SIRAMA, nametaka fefy amin’ny tany hanatanterahana ny sekoly, ambara fa “projet présidentiel”, ny 21 novambra lasa teo.
25 novembre : Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 2021
25 novembre : Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 2021.
jeudi, 25 novembre 2021 09:57
25 novembre : Journée mondiale anti foie gras.